Kambodza-Thailandy: Adihevitra manodidina ny vohikala ilovethailand.org · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2018 1:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, Español, বাংলা, English
Vao haingana no niteraka resabe tamin'ny tambajotra ny fandefasana ny vohikala ilovethailand.org. (tsy mandeha intsony ny rohy). Nanambara ny Praiminisitra thailandey Abhisit Vejjajiva fa io vohikala io dia mikendry ny hamerina indray ny endriky ny firenena ary hampitambatra ny firenena ao anatin'ireo fikorontanana tato ho ato. Teraka avy amin'ireo fitakiana tao amin'io vohikala io ny adihevitra mikasika ny ” tany verin'i ” Thailandy – tany izay tsy iza fa i Kambodza ankehitriny.
Mitatitra ny KI Media [amin'ny teny anglisy avokoa ireo blaogy voatanisa]
Gazety lehibe mpiseho isanandro amin'ny teny anglisy Phnom Penh Post no mitatitra fa ezahan’ ireo tomponandraikitra Kambodziana ny handinika an'ireo fitakiana. Notondroiny i M. Phay Siphan, mpitondra tenin'ny Filankevitry ny Minisitra, amin'ny filazana fa “manova ny zava-misy ara-tantara izy ireo (ireo Thailandey). Tena tafahoatra io” Araka ny voalazan'ny Phnom Penh Post, tamin'ny taona 1794 i Thailandy – izay nantsoina hoe Siam – dia naka an'ireo faritany tao Siem Reap sy Battambang izay fahavoazana ho an'ny fanjakana Khmer, saingy naverina ireo tany ireo tamin'ny alalan'ny fifanarahana nisy teo amin'i Thailandy sy Frantsa tamin'ny martsa 1907.
Ny Khmerization, izay manao blaogy eo amin'ny KI Media, milaza amintsika fa misy vokany ny ilovethailand.org
ny fahaterahan'ny ilovekhmer.org, vohikala Khmer iray natsangana tao anaty tanjona tokana mba hanoherana an'ireo “fiampangana izay azo porofoina ny tsy fahamarinany” nataon'ny vohikalan'ny Praiminisitra thailandey, ilovethailand.org. Nahazo laza teo noho eo avy amin'ireo mpisera io vohikala io, miaraka amin'ny isan'ireo mpitsidika marobe azony.”
Naseho tamin'ny lahatsary tao amin'io vohikala io ny ” tany verin'i Thailandy”. Nangataka ny hanatsoahana an'io lahatsary io amin'ny vohikala ny ambasady Kambodziana ao Bangkok. Details are Sketchy, miaraka amin'ireo fanehoankevitry ny ThaRum, mitatitra fa nosakanana ao Kambodza ny ilovethailand.org, saingy tsy mazava hoe ny andaniny iza no manakana azy.
Eo amin'ny Thai Intelligent News Weblog, sahala amin'ny hoe ilay “vohikala dia mety ho niharan'ny fijirihana, araka ny voalaza, ary nanjary tsy azo nidiran'ireo firenena marobe manerantany, rehefa injay notafihan'ireo Thailandey tezitra, mpanohana ny demomkrasia sy mpandàla ny aterineto, ilay vohikala”.
Tohizan'ny Thai Intelligent News Weblog amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fanindrahindrana fitiavan-tanindrazana ankoatra ireo raharaha hafa, amin'ny filazàna fa:
Ho an'ireo antony isankarazany, manana olana tena sarotra eo amin'ny endrika ankapobeny i Thailandy. Ny vahaolana [Abhisit] no fanentanana ankapobeny “Tiako i Thailandy”. Tamin'ny lasa, efa sahirana tamin'ny fifandraisany tamin'ireo mpiray vodirindrina taminy i Thailandy noho io resaka fanindrahindràna tanindrazana ara-kolontsaina sy ara-tantara io – ary koa niaraka tamin'i Laos, Myanmar sy Kambodza. Zavatra tsara ny fanindrahindràna ny tanindrazana, raha toa ka fomba iray hanorenana fitiavana sy firaisankinam-pirenena, saingy raha toa ny fanindrahidràna ny tanindrazana ka midika ho fifandirana miaraka amin'ireo manodidina, dia ho lasa lavitra loatra.
Blaogera thailandey iray hafa, Thai 101, manipika fa ilàna fanivanantena ireo fitsipika sy ireo fepetra mikasika ny ilovethailand.org:
Toa sahala amin'ny endrika tsy ara-toe-karena amin'ny drafitry ny firenena mikasika ny “fanarenana” io vohikala io. Vohikala iray vatsian'ny governemanta vola izay ireo izay tsy misy afaka ekena ho afaka miditra aminy afa-tsy ireo niaky fa tena tia ny fireneny mihoatra noho ny fiainany mba tsy hanehoana afa tsy ny fanindrahindrana sy ny fideràna ho azy. Azoko antoka fa hitondra fahagagana io mba handrosoana adihevitra iray misokatra sy voasaina tsara Indrindra fa ity loza mitatao misaron-tava ity amin'ny farany. Mahafatifaty.
Azo jerena eto ambany ilay lahatsary ary tao amin'ny Bangkok Crimes, izay manamarika fa ny “ampahany fahefatra amin'ny tany very, dia ny Preah Vihear.”